Ukumakethwa Kwedatha Kuyashisa! | Martech Zone
Ukumakethwa Kwedatha Kuyashisa!
NgoMgqibelo, Novemba 9, 2013 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Okutholakele okuthokozisayo okuvela kwaBlueKai's ukutadisha ngamasu wokukhangisa aqhutshwa idatha. Bengicabanga ukuthi kuyangijabulisa ikakhulukazi ukunyakaza kokubaluleka uma kukhulunywa ngamathuba afanele kakhulu wesiphambano / wesiphambano. Ngenkathi ukumakethwa kwezinjini zokucinga kuqhubeka nokuba ngukhiye, kwehle kakhulu. Ngikholwa ukuthi lokho kungenxa yokufihla kwe-Google amagama angukhiye nokuqina kwama-algorithms awo abulala i- Imboni ye-SEO. Abakhangisi babuyele emuva ekubukeni isithombe esikhulu kulokho okunomthelela omkhulu emalini engenayo kunokujaha amagama angukhiye nokuhlelwa.
Ngijabule futhi nokubona i-imeyili igxumela kuma-5 aphezulu nokuwa komphakathi. Ukumaketha nge-imeyili kuyimboni eneminyaka engama-20 ubudala - yasendulo kwi-Intanethi hhayi emnandi kakhulu. Kepha amapulatifomu wokumaketha (njengabaxhasi bethu abavela Ngakwesokudla ku-Interactive) ibuyisa okuhle ngemizamo yokumaketha eqhutshwa kakhulu yedatha. Ezomphakathi kuseyisu elisebenzisekayo, kepha izinkampani ziyazi ukuthi ukumaketha nge-imeyili kubalulekile uma kukhulunywa ngokuphusha nokugcinwa!
Kuhle ukubona ividiyo inakwa futhi! Izindleko zehlile futhi okulindelwe ividiyo kukhuphukile. Siphusha wonke amaklayenti ethu ukuthi athuthukise imitapo yolwazi yamavidiyo (manje sesinekhasi le-Marketing Video!) Futhi sibabeka phambili futhi bagxile kuwo wonke amakhasi angawodwa esayithi labo. Bheka ifayela le- Izinhlobo Ezingu-10 Zamavidiyo Wokuchaza kusuka kumkhangisi wethu Yum Yum Amavidiyo ukuthola eminye imibono!
Tags: ezishintshayobluekaiIdathaukumaketha okuqhutshwa idathaukumaketha kwe-databaseimeyiliinfographicukumaketha ividiyoAmavidiyo WokumakethaSesha Marketingsocial mediaSocial Media Marketing
5 Isoftware njengoMkhonyovu Wenkontileka Yensizakalo Okufanele Uyigweme
Ishidi Lokusebenzela: Ukumaketha Okungenayo Kwenziwe Kube Lula